Nepal Official Blog | Gmoneytrans - Часть 2
तपाईले जिमनी पे खाता लाइ पैसा बचत गर्न लाई मात्र नभई आवस्यकता अनुसार पैसा भुक्तान पनी गर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागी नजिकैको स्टोरको एटीएमबाट ब्यालेन्स रकम सजिलै झिक्न सक्नुहुन्छ ।
जिमनी पे खाताले तपाइँको सबै वित्तीय समस्याको समाधान प्रदान गर्दछ । जिमनी ट्रान्स एप प्रयोग गरी आफ्नो सम्पूर्ण बित्तिय कारोबार हरु छिटो र भरपर्दो तरिकाले गर्नुहोस। ।
कोरिया बाहिर पैसा कसरी पठाउने?
तपाइले बिश्वको विभिन्न मुलुक हरुमा सजिलो र द्रुत तरीकाले पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाइले पैसा पठाउने विभिन्न तरिका छनौट र प्राप्त गर्न चाहेको देशहरु छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
कोरिया भित्र पैसा कसरी पठाउने?
तपाईंले जिमनी पे खाता प्रयोग गरी कोरिया बाट कोरिया मै सजिलै र छिटो तरिकाले पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइले कोरियाको जुन सुकै बैंक खाता वा जिमनी पे खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ ।
जिमनी पे ’bout जान्न पर्ने कुराहरु
डिसेम्बर 31, 2019
कोरियामा जिमनी पे एपले तपाईको सबै वित्तीय समाधानहरू प्रदान गर्दछ । जिमनी पे खाता प्रयोग गरी तपाईंले पैसा जम्मा गर्न, पैसा पठाउन, पैसा प्राप्त गर्न, र सजिलैसँग एटिएम मार्फत भुक्तानी लिन मद्दत गर्दछ। जिमनी पे खाता बाट, तपाईंले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय मनी ट्रान्सफरको साथै कोरिया मै घरेलू ट्रान्स्फर हरुलाई अटोमेटेड गरी तनावमुक्त रहन सक्नुहुन्छ।
जिमनी पे खातामा पैसा कसरी थप्ने?
तपाईंको ३ तरिकाले जिमनी पे खातामा पैसा थप्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले डाईरेक्ट डेबिट र बैंक ट्रान्सफर विधि प्रयोग गरेर पैसा थप्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंसँग कोरियाको बैंक खाता छैन भने तपाईंले सिधै एटिएम बाट नगद जम्मा पनि गर्न सक्नुहुनेछ।
जिमनी पे खाता कसरी दर्ता गर्ने?
जिमनी पे खाता ले तपाइँको वित्तय व्यस्थापन गर्नलाई सहजता प्रदान गर्दछ । तपाईंले सजिलै पैसा जम्मा गर्न, पठाउन र पैसा झिक्न सक्नुहुनेछ । साथै आफ्नो कारोबार हरुलाई चाहेको बेला तालिका बनाई अटोमेटेड गर्न सक्नुहुनेछ । जिमनी पे खाता दर्ता गर्न छिटो र सजिलो छ। यदि तपाईंले जिमनी ट्रान्स एप पहिले नै दर्ता गर्नु भएको छ भने तपाईंको जिमनी पे खाता स्वत स्वचालित हुनेछ ।
पासपोर्ट मात्र हुनेले पैसा कसरी पठाउने ?
डिसेम्बर 8, 2019
अटो सेन्ड खाता बाट हजुरहरुले सजिलो र भरपर्दो तरिकाले पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ ।
कोरिया र नेपालको संस्कृति फरक भएकोले गर्दा कोरियामा दैनिक जीवन देखि कार्य थलोमा विभिन्न समस्याहरु आइपर्न सक्छ। विशेष गरि कार्यथलोमा आफु भन्दा माथिको दर्जाको कोरियन कामदार र साहुको हातबाट दु:ख पाएको घटनाहरु बेला बेलामा सुन्न पाईन्छ।